Maqaallada Ohad Samet ee Martech Zone |
Maqaallada by Ohad Samet
Ohad Samet waa aasaasaha iyo agaasimaha guud ee TrueAccord, barnaamijkii ugu horreeyay noociisa ee soo kabashada algorithmic. TrueAccord waxay adeegsaneysaa barashada mashiinka, falanqaynta akhlaaqda iyo hab bini aadamnimo si looga caawiyo shirkadaha iyo ganacsiyada yaryar inay soo ceshadaan lacagihii horay ujiray iyo inay ilaaliyaan cilaaqaadka wanaagsan ee macaamiisha.
Aruurinta Daynta ee Bilaabista eCommerce: Tilmaamaha qeexaya
Sabtida, Janaayo 19, 2019 Sabtida, Janaayo 19, 2019 Ohad Samet
Khasaaraha macaamil ganacsi ku saleysan ayaa xaqiiqo u ah nolosha ganacsiyo badan, sababtoo ah dib u celinta, biilasha aan la bixin, dib u noqoshada, ama alaabada aan la soo celin. Si ka duwan ganacsiyada amaahda bixiya ee ay tahay inay aqbalaan boqolkiiba inta qasaaraha ee qayb ka ah moodeelkooda ganacsi, bilowgyo badan ayaa ula dhaqma khasaarooyinka macaamilku inay yihiin dhibaato aan u baahnayn fiiro gaar ah. Tani waxay u horseedi kartaa nabaad-guur khasaaro sababta oo ah anshaxa macaamiisha oo aan la hubin, iyo dib-u-dhac khasaaro oo si weyn hoos ugu dhigi kara dhowr qof